रफ्फुमेनको कथा र व्याख्यात्मक टिप्पणी « Anumodan National Daily
By : - शेरबहादुर वस्नेत
प्रकाशित मिति : १६ फाल्गुन २०७८, सोमबार २१:५२
एकादेशमा एकजना उटपट्यांग बोल्ने राजा रहेछन । भारदारी सभामा एक न एक उटपट्यांग कुरा गरिरहने रहेछन । केही चाकरहरु राजाको बेबकुफी पनबाट फाइदा लिनेहरु राजाले जे हर्कत गरे पनि हो हो मा हो हो मिलाएर राजालाई झन उक्साउने रहेछन ।
दरवारको लामो समयदेखि सेवा गरीरहेका र दरवारको भलो चाहानेहरु राजाको हर्कतबाट राजसंस्थाको शाख गिर्ने त हैन ? भनेर चिन्तित हुने रहेछन तर के गर्नु उनीहरु यस्ता हर्कत रोक्न सक्ने पहुँच भन्दा बाहिर थिए ।
दरवारको यो सवै चर्तिकला र कमजोरी थाहा पाएको एक छट्टुले दरवार पस्ने र राजाको कमजोरीको फाइदा लिने विचार बनाएछ । र,उसले दरवारको गेट नजिक द्धारपालेहरुले सुन्ने गरी जोर जोरले कराएर भन्न थालेछ , म संग एकदमै राम्रो क्षमता छ । म कुराको रफ्फु (कपडामा परेको सानो प्वाललाई धागोले नदेखिनेगरी सिउने तरिका) गर्न सक्छु भन्दै ठूलो स्वरले कराउन थालेछ ।
द्धारपालेले यो कुरा सुनेर सोधेछ ए भद्र मानिस तपाँइ रफ्फु गर्ने क्षमता छ भन्नु हुन्छ के को रफ्फु गर्नु हुन्छ ? जवाफमा उसले भनेछ म विग्रेको कुराको रफ्फु गर्छु । द्धारपालेलाइ लागेछ ओ हो यो त राजालाई काम लाग्ने मानिस रहेछ । राजा जहिले पनि कुरा उटप्टयांग गर्छन र कुरा विगार्छन जसका कारण राजदरवार र राजसंस्थाप्रति प्रजाको विश्वास कम हुने डर छ ।
दारपालेले राजालाई सवै सूचना दिदै उसले महाराजलाई भेट्ने विन्ति विसाएको कुरा सुनाएछ । राजाले त्यस छट्टु मानिसलाइ बोलाउने हुकुम भएछ । राजाले उक्त रफ्फुमेनको अन्तरवार्ता लिएपछिसंगै राख्ने गरी नियुक्ती गरेछन ।
एक दिन राजा दलबल सहित शिकार खेल्न गएछन । शिकारबाट फर्किएर भोलीपल्ट भारदारी सभामा शिकार खेल्दाको वर्णन सुनाएछन । सवै भारदारी सभाका सदस्यहरु र प्रजाहरु हो सुन हिजो शिकार खेल्दा गजवको अनुभव छ ।
हामी जंगल पुग्ना साथ हाम्रो अगाडि एउटा मृग देखियो मैले बन्दुकले मृगको खुट्टामा गोली हाने गोलीले मृगको कान छेडेर गयो र मृग त्यँही मर्यो भनेर शिकार खेल्दाको अनुभव सुनाए ।
भारदारी सदस्य हरु अन्य प्रजाहरु राजाको कुरा सुनेर मुखामुख गरे । खुट्टामा हानेको गोलीले कसरी कान छेड्यो ? सवैले रफ्फुमेन तिर हेरेछन । रफ्फुमेनले कुरा बुझ्यो राजाले उट्पटयांग कुरा गरे कुरा विग्रियो । रफ्फुमेन जुरुक्क उठेर सवैलाई संवोधन गर्दै भनेछ सुन्नुस सज्जनहरु महाराजले भनेको एकदम ठिक हो खुट्टामा हानेको गोलीले मृगको कान छेडेर मर्यो । महाराजले गोली हानेको वेला मृग कान कन्याइरहेको थियो । रफ्फुमेनको कुरा सुनेर भारदारी सभाका मानिसहरुको मुहारमा मुस्कान छाएछ ।
एवं रितले रफ्फुमेनले राजाका उटपट्टयागं र विगारेको कुराहरुको रफ्फु गरिरह्यो । दरवारमा उसको क्षमताको पनि कदर राम्रो हुन थाल्यो ।
यसै गरेर एक दिन राजा शिकारबाट फर्केपछि फेरि शिकारको अनुभव सुनाए । सुन भारदारहरु आज शिकार खेल्दा गजवको आनन्द आयो । जव हामी जंगल पुग्यौं एउटा मृग हान्निएर आयो मैले बन्दुक निकालेर ड्यागं… गोली हाने कहिले गोली पछिपछि मृग अघिअघि कहिले मृग पछिपछि गोली अघीअघी यसरी लुकामारी चलेपछी धेरैपछि मृगलाइ ड्यागं गोली लागेर मृग ढल्यो ।
राजाको कुरा सुनेपछि भारदारहरुले रफ्फुमेन तिर हेरे । रफ्फुमेन अलमलमा पर्यो रफ्फु कसरी गर्ने ? जुरुक्क उठेर भनेछ महाराज रफ्फु त सानो तिनो प्वालमा मात्र संभव हुन्छ यो त ठुलै भ्वांग पर्यो यसलाइ त टालो नै हाल्नुपर्छ रफ्फु गर्न मिल्दैन ।
यो कथा नेपाली राजनितीका महाराजहरु र महाराजहरुले विगारेको कामको रफ्फु गर्ने रफ्फुमेनहरुसंग मिल्दोजुल्दो छ ।
अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई यतिसम्म गिजोले कि अन्तमा आएर रफ्फुमेनको सहयोगमा व्याख्यात्मक टिप्पणीको टालो हाल्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याए ।
कि त यो ठिक थियो कि त यो बेठिक थियो । जसले यस प्रकृयाको शुरुवात गरे उनीहरुले पक्कै पनि यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको बारेमा विचार विमर्श गर्नु पर्ने हो र गरेको पनि हुनुपर्छ ।
तर आम जनताको विचमा जाँदा यसलाइ उट्पटयांग राजाको कहानी जस्तो नबुझिने गरी देशलाई विभाजित अवस्थामा पुर्याएर अनुमोदन गरिएको छ त्यसमा पनि व्याख्यात्मक टिप्पणीको सहारामा ।
दुई पक्ष वीच हुने संझौता एक पक्षले आफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्दा अर्को पक्षले लुरुलुरु मान्नुपर्ने पनि दुई पक्षिय सम्झौता हुन्छ र ? जे होस राम्रो नराम्रो के हो अनुमोदन भएको छ । यहीकारणले देश र समाजले कुनै अनिष्ठ भोग्नु नपरोस ।